အျမင္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရင္ ဒူးရင္းသီးေတာင္စားမယ့္သူရွိမွာ မဟုတ္ဘူး. လို႔ ဆုိလုိက္တဲ့ ရွင္ယြန္းျမတ္ (ရုုပ္/သံ) - Tha Dinn Oo
အျမင္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရင္ ဒူးရင္းသီးေတာင္စားမယ့္သူရွိမွာ မဟုတ္ဘူး. လို႔ ဆုိလုိက္တဲ့ ရွင္ယြန္းျမတ္ (ရုုပ္/သံ)
ယခုအခါမွာေတာ့ Fashion Magazine Myanmar မွ အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ သူမကေတာ့ အျမင္နဲ႔ဆုံးျဖတ္ရင္ ဒူးရင္းသီးေတာင္စားမယ့္သူရွိမွာ မဟုတ္ဘူး… ” ရွင္ယြန္း သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး အထင္ေသးသြားတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ငါ့ကို ဒီလိုေတြ လုပ္ရတာလဲေပါ့”…..သူတို႔ရဲ႕ တဏွာေရာဂါပိုးက ငယ္ထိပ္ကိုတက္ေစာင့္ေနလို႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ဒီလိုေတြျမင္တာေလ…ေဝဖန္တာမဟုတ္ပဲ ေအာက္ဖဲလွန္တာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္တယ္…….လိုဆိုၿပီးေျပၾကာထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။သူမကေတာ့ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဝန္းရံျခင္းကိုခံေနရတာျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္အမိုက္စားေလးျဖစ္ပါတယ္
ယခုအခါမှာတော့ Fashion Magazine Myanmar မှ အင်တာဗျူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် သူမကတော့ အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စားမယ့်သူရှိမှာ မဟုတ်ဘူး… ” ရှင်ယွန်း သူ့ရဲ့ စိတ်ကို တော်တော်လေး အထင်သေးသွားတယ်၊ ဘာ့ကြောင့် ငါ့ကို ဒီလိုတွေ လုပ်ရတာလဲပေါ့”…..သူတို့ရဲ့ တဏှာရောဂါပိုးက ငယ်ထိပ်ကိုတက်စောင့်နေလို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဒီလိုတွေမြင်တာလေ…ဝေဖန်တာမဟုတ်ပဲ အောက်ဖဲလှန်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်…….လိုဆိုပြီးပြေကြာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက်စားလေးဖြစ်ပါတယ်
အနုပညာရှင်တွေ ပါတီတချို့က ဝယ်ယူခြင်းခံရတာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် ပဲလို့ ပြောလာသူ ဦးကျော်သူ
အနုပညာရှင်တွေကို ပါတီတချို့က ဝယ်ယူအသုံးချမှုတွေ ခံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့် ရဲ့ လုပ်ရပ် ပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပါလို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌဦးကျော်သူ က ပြောပြလာပါတယ်။ ယခင်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အနုပညာရှင်များ ပါတီ တချို့ရဲ့ ဝယ်ယူခြင်းခံရပြီး ဒီလိုဝယ်ယူ အသုံးချခြင်းခံရတယ်ဆိုတာ မိမိခံယူချက်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ “အနုပညာရှင်တွေ အသုံးချခံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံယူချက်က ခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ကျွန်တော် တို့ဆို အရင်အစိုးရ လက်ထက်တွေတည်းက ဘယ်သူမှ မပြောဆိုရဲတဲ့ ကာလတည်းက အများအကျိုးအတွက်ကို သယ်ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အဆင်ပြေမယ့် အဖွဲ့အစည်းကို မဲပေးရမှာပဲ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပါတီတိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုမယ့်သူကို မဲပေး ရမှာပဲ။ ဘယ်သူစည်းရုံးပါစေ ကိုယ်မပါသွားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ တကယ်တော့ မဲထည့်တဲ့ အချိန်ကာလက အဓိကကျပါတယ်။ […]
ပခုက္ကူမြို့ သီဟိုဠ်ရင်ဘုရားအနီးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက တွေ့ရှိသော လှိုဏ်ဂူအကြောင်း အပြည့်အစုံ
ယနေ့ နံနက် ပခုက္ကူ သီဟိုဠ်ရှင် ဘုရားကြီး တွင် တွေ့ရသော လှိုဏ်ခန်းမှာ အခန်း လေးခန်းပါသော ပုံစံတွေ့ရသည်။အခန်းကူးများလည်းပါသလို အမိုးမျက်နှာကျက်မှာ အခုံးပုံစံ ဖြစ်နေသည်။ ပေအုတ်များဖြင့်လုပ်ထားသော် သရွတ် အနေအထားအရ ပြန်လည် ပြင်ထားသည့် ထုံးသရွတ် ပုံစံလည်း တွေ့ရသည်။အသက် ကိုးဆယ်ကျော် ပန်းရံဆရာကြီးနှင့် ဂေါပက ကြီးများလည်း မသိဟု ဆိုသည်။အထဲမှာ ဘာပစ္စည်းမှ မထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မိမိအယူအဆ အရတော့ ရှေးရှေး ဂေါပက ကြီးများသည် ရန်သူမျိုး ငါးပါး အန္တရာယ်မှ ရှောင်နိုင်ရန် မြေတိုက်ခန်း လုပ်ထားသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ယနေ့ နံနက် ပခုက္ကူ သီဟိုဠ်ရှင် ဘုရားကြီး တွင် တွေ့ရသော လှိုဏ်ခန်းမှာ အခန်း လေးခန်းပါသော ပုံစံတွေ့ရသည်။အခန်းကူးများလည်းပါသလို အမိုးမျက်နှာကျက်မှာ အခုံးပုံစံ […]
ခါးေသးေသးေလးက အထင္းသားေပၚလြင္ေနၿပီး ခါးလွည့္ ကြင္းေလးနဲ႔ မရပ္ မ နားလွည့္ျပေန တဲ့ ေခးဆက္သြင္ ရဲ႕ ဗီဒီ ယို ဖိုင္
COFFEE တစ္ခြက္ဟာ ကိုယ့္ကို ရင္ခုန္ေစတယ္ေလ ဆိုလုိက္တဲ့